၃၀ အရွယ်ရောက်သည်အထိ ချစ်သူနဲ့ လက်မထပ်ဖြစ်သေးတဲ့အခါ -
၃၀ အရွယ်ရောက်သည်အထိ ချစ်သူနဲ့ လက်မထပ်ဖြစ်သေးတဲ့အခါ
Posted on November 28, 2018 November 28, 2018 Author Sugar Cane	Comment(0)
ဘိုးဘွားရိပ်သာရောက်မှ မင်္ဂလာဆောင်ဖြစ်နေမှာစိုးလို့ 😂😛😝
အချို့သော သမီးရည်းစားတွေရှိတတ်ကြပါတယ်။ နှစ်ရှည်လများတွဲလာကြပြီး လက်မထပ်ဖြစ်ကြသေးတဲ့ အတွဲတွေပေါ့။ အစကတည်းက လက်မထပ်ဘဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ အတွဲတွေကတော့ အေးဆေးပေါ့နော်။ လက်ထပ်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးရှိပေမဲ့ အခုထိ လက်ထပ်ဖို့အတွက် ရေရေရာရာ ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးဘူးဆိုရင်တော့ ၃၀ အရွယ်မှာ ဒါလေးတွေစစဉ်းစားသင့်နေပါပြီနော်။
၁။ လက်မထပ်ဖြစ်သေးတာ မပြည့်စုံသေးတဲ့ အခြေအနေမို့လို့လား?
အရွယ်ရလာလေလေ၊ အရာရာကို ပိုပြီးတွက်ချက်စဉ်းစားလာလေလေပါပဲ။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပြည့်စုံမှ လက်ထပ်မယ်ဆိုတဲ့ အတွဲတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်။ ကလေးယူမယ်လို့ စဉ်းစားထားတဲ့ ယောင်းယောင်းတို့ဆိုရင် အသက် ၃၀ လောက်ရောက်လာပြီဆိုရင် ဒီထက်ပို အချိန်မဆွဲသင့်တော့ပါဘူး။ ချက်ချင်းမယူဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်တောင် ဘယ်နှစ်မှာတော့ လက်ထပ်မယ်ဆိုပြီး တိတိကျကျသတ်မှတ်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်သင့်နေတဲ့ အနေအထားတစ်ခုပါ။
၃၀ အရွယ်ရောက်ပြီဆိုတော့ ဘဝရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကို တိတိကျကျ ရှိနေလောက်ပြီလေ။ ငယ်ငယ်ကလို စမ်းတဝါးဝါး လုပ်နေတာမျိုးလည်း မဟုတ်တော့ ကိုယ့်အောင်မြင်ရေးအတွက် တိတိကျကျသတ်မှတ်ပြီး ကြိုးစားနေသင့်ပါပြီ။ ဒီလိုမျိုး ကိုယ်လည်း အခြေခိုင်တဲ့ အနေအထားတစ်ခုကို ရောက်နေပြီဆိုရင်တော့ လက်ထပ်ဖို့လည်း စဉ်းစားထားသင့်ပါပြီ။
Related Article >>> သုံးဆယ်အရွယ်တို့ အချစ်အကြောင်း
၂။ သူ့ဘက်က လက်ထပ်ဖို့ မစဉ်းစားသေးတာလား?
ဒါကလည်း ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တွေ့မြင်နေရတဲ့ အဖြစ်တစ်ခုပါ။ မိန်းကလေးဘက်က လက်ထပ်ချင်နေပေမဲ့ ကောင်လေးဘက်က လက်ထပ်ဖို့အရေးကို နေ့ရွှေ့ညရွှေ့လုပ်နေတာမျိုးပါ။ ကောင်လေးဘက်က ဒီလို မပြတ်မသားလုပ်နေပြီဆိုရင်တော့ ယောင်းဘက်က ပြတ်သားဖို့လိုပါပြီ။ ပထမဆုံးစဉ်းစားရမှာက ကိုယ့်ကောင်လေး မပြတ်မသားလုပ်နေတာ ဘာကြောင့်လဲစဉ်းစားပါ။
နှစ်ကိုယ်တူဘဝတည်ထောင်ဖို့ အချိန်ယူတာဖြစ်သင့်ပေမဲ့ အချိန်တော့မဆွဲသင့်ဘူးလေနော်
သူ့ဘက်က အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အောင်မြင်မှုရနေပေမဲ့ လက်ထပ်ဖို့ တွေဝေနေတာလား၊ ဘဝမှာ ရေရာတဲ့ အောင်မြင်မှုမရှိသေးလို့ တွေဝေနေတာလား ဆိုတာပေါ့။ ဒီအခါ နှစ်ဦးသားဘဝအတွက် တိကျရေရာတဲ့ ပန်းတိုင်တစ်ခုကို ထားသင့်ပြီဆိုတာ သူ့ကိုဖြောင်းဖြပါ။
ရေရာတဲ့ အခြေအနေမျိုး မရှိသေးတဲ့ ချစ်သူဆိုရင်လည်း သူကိုယ်တိုင်ကကြိုးစားချင်စိတ်မရှိဘဲ ဝေလေလေလုပ်နေလို့ မအောင်မြင်တာလား၊ ကြိုးစားရဲ့သားနဲ့ မအောင်မြင်သေးတာလားဆိုတာကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။
ဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ၃၀ဝန်းကျင်ရောက်သည်အထိ ကိုယ့်ကို လက်ထပ်ဖို့ အချိန်ဆွဲနေ၊ တိကျရေရာတဲ့ ရည်မှန်းချက်ထားဖို့ ပျက်ကွက်နေတယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ဘက်က စတင်လမ်းခွဲသင့်ရင် လမ်းခွဲဖို့ မတွေဝေသင့်ပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ ပျိုရွယ်တဲ့အချိန်ကို မထိုက်တန်သူအနားမှာ ကုန်ဆုံးလိုက်ရပြီး အချိန်လွန်မှ သူနဲ့လည်း ပြတ်စဲ၊ တစ်ယောက်တည်းကျတော့လည်း မနေချင်ဆိုတာမျိုး ဖြစ်နေရင် အဆင်မပြေဘူးလေ နော်..
Related Article >>> ဖိနပ်နဲ့တူသောယောက်ျားများ
သူရော ကိုယ်ရောက ကလေးယူဖို့အစကတည်းက ရည်ရွယ်မထားဘူးဆိုရင်တော့ ထည့်စဉ်းစားရမယ့် အချက်တစ်ချက်လျော့သွားပါပြီ။ အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲ ကလေးယူချင်တယ်ဆိုရင် သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ရဲ့ ဘဝအစီအစဉ်တွေ ပိုပြီး တိကျဖို့ လိုအပ်လာပါပြီ။
ဒီကလေးကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံထားဖို့အတွက် အချိန်ယူကြိုးစားသလို ကလေးကို ဘယ်အရွယ်မှာ ယူမယ်ဆိုတာတွေကိုပါ ထည့်စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မိန်းကလေးဘက်က အသက်အရမ်းကြီးသွားရင် ကလေးယူဖို့ အဆင်မပြေတာတွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။
ဒါကတော့ သုံးဆယ်အရွယ်ဝန်းကျင်အထိ လက်မထပ်ဖြစ်ကြသေးတဲ့ စုံတွဲတွေ စဉ်းစားသင့်တဲ့အချက်တွေပါ။ အချစ်စစ်မှန်ရင် အချိန်တွေကြာသွားလည်း အချစ်တွေ လျော့မသွားတာ မှန်ပေမဲ့ အချိန်ဆွဲလွန်းရင်လည်း ဘိုးဘွားရိပ်သာကျမှ မင်္ဂလာဆောင်ဖြစ်မှာစိုးလို့ အက်ဒ်မင်သတိပေးလိုက်ရပါတယ်လို့ 😂😛😝
အခြို့သော သမီးရညျးစားတှရှေိတတျကွပါတယျ။ နှဈရှညျလမြားတှဲလာကွပွီး လကျမထပျဖွဈကွသေးတဲ့ အတှဲတှပေေါ့။ အစကတညျးက လကျမထပျဘဲ လှတျလှတျလပျလပျနဖေို့ ဆုံးဖွတျထားတဲ့ အတှဲတှကေတော့ အေးဆေးပေါ့နျော။ လကျထပျမယျဆိုတဲ့ စိတျကူးရှိပမေဲ့ အခုထိ လကျထပျဖို့အတှကျ ရရေရောရာ ဆုံးဖွတျခကျြမခရြသေးဘူးဆိုရငျတော့ ၃၀ အရှယျမှာ ဒါလေးတှစေစဉျးစားသငျ့နပေါပွီနျော။
၁။ လကျမထပျဖွဈသေးတာ မပွညျ့စုံသေးတဲ့ အခွအေနမေို့လို့လား?
အရှယျရလာလလေေ၊ အရာရာကို ပိုပွီးတှကျခကျြစဉျးစားလာလလေပေါပဲ။ နှဈဦးနှဈဖကျပွညျ့စုံမှ လကျထပျမယျဆိုတဲ့ အတှဲတှလေညျးရှိတတျပါတယျ။ ကလေးယူမယျလို့ စဉျးစားထားတဲ့ ယောငျးယောငျးတို့ဆိုရငျ အသကျ ၃၀ လောကျရောကျလာပွီဆိုရငျ ဒီထကျပို အခြိနျမဆှဲသငျ့တော့ပါဘူး။ ခကျြခငျြးမယူဖွဈသေးဘူးဆိုရငျတောငျ ဘယျနှဈမှာတော့ လကျထပျမယျဆိုပွီး တိတိကကြသြတျမှတျလိုကျတာပဲဖွဈဖွဈ လုပျသငျ့နတေဲ့ အနအေထားတဈခုပါ။
၃၀ အရှယျရောကျပွီဆိုတော့ ဘဝရဲ့ရညျမှနျးခကျြတှကေို တိတိကကြ ရှိနလေောကျပွီလေ။ ငယျငယျကလို စမျးတဝါးဝါး လုပျနတောမြိုးလညျး မဟုတျတော့ ကိုယျ့အောငျမွငျရေးအတှကျ တိတိကကြသြတျမှတျပွီး ကွိုးစားနသေငျ့ပါပွီ။ ဒီလိုမြိုး ကိုယျလညျး အခွခေိုငျတဲ့ အနအေထားတဈခုကို ရောကျနပွေီဆိုရငျတော့ လကျထပျဖို့လညျး စဉျးစားထားသငျ့ပါပွီ။
Related Article >>> သုံးဆယျအရှယျတို့ အခဈြအကွောငျး
၂။ သူ့ဘကျက လကျထပျဖို့ မစဉျးစားသေးတာလား?
ဒါကလညျး ပတျဝနျးကငျြမှာ တှမွေ့ငျနရေတဲ့ အဖွဈတဈခုပါ။ မိနျးကလေးဘကျက လကျထပျခငျြနပေမေဲ့ ကောငျလေးဘကျက လကျထပျဖို့အရေးကို နရှေှ့ညေ့ရှလေု့ပျနတောမြိုးပါ။ ကောငျလေးဘကျက ဒီလို မပွတျမသားလုပျနပွေီဆိုရငျတော့ ယောငျးဘကျက ပွတျသားဖို့လိုပါပွီ။ ပထမဆုံးစဉျးစားရမှာက ကိုယျ့ကောငျလေး မပွတျမသားလုပျနတော ဘာကွောငျ့လဲစဉျးစားပါ။
နှဈကိုယျတူဘဝတညျထောငျဖို့ အခြိနျယူတာဖွဈသငျ့ပမေဲ့ အခြိနျတော့မဆှဲသငျ့ဘူးလနေျော
သူ့ဘကျက အတိုငျးအတာတဈခုအထိ အောငျမွငျမှုရနပေမေဲ့ လကျထပျဖို့ တှဝေနေတောလား၊ ဘဝမှာ ရရောတဲ့ အောငျမွငျမှုမရှိသေးလို့ တှဝေနေတောလား ဆိုတာပေါ့။ ဒီအခါ နှဈဦးသားဘဝအတှကျ တိကရြရောတဲ့ ပနျးတိုငျတဈခုကို ထားသငျ့ပွီဆိုတာ သူ့ကိုဖွောငျးဖွပါ။
ရရောတဲ့ အခွအေနမြေိုး မရှိသေးတဲ့ ခဈြသူဆိုရငျလညျး သူကိုယျတိုငျကကွိုးစားခငျြစိတျမရှိဘဲ ဝလေလေလေုပျနလေို့ မအောငျမွငျတာလား၊ ကွိုးစားရဲ့သားနဲ့ မအောငျမွငျသေးတာလားဆိုတာကို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး စဉျးစားဖို့လိုပါတယျ။
ဘာကွောငျ့ပဲဖွဈဖွဈ ၃၀ဝနျးကငျြရောကျသညျအထိ ကိုယျ့ကို လကျထပျဖို့ အခြိနျဆှဲနေ၊ တိကရြရောတဲ့ ရညျမှနျးခကျြထားဖို့ ပကျြကှကျနတေယျဆိုရငျ ကိုယျ့ဘကျက စတငျလမျးခှဲသငျ့ရငျ လမျးခှဲဖို့ မတှဝေသေငျ့ပါဘူး။ ကိုယျ့ရဲ့ ပြိုရှယျတဲ့အခြိနျကို မထိုကျတနျသူအနားမှာ ကုနျဆုံးလိုကျရပွီး အခြိနျလှနျမှ သူနဲ့လညျး ပွတျစဲ၊ တဈယောကျတညျးကတြော့လညျး မနခေငျြဆိုတာမြိုး ဖွဈနရေငျ အဆငျမပွဘေူးလေ နျော..
Related Article >>> ဖိနပျနဲ့တူသောယောကျြားမြား
သူရော ကိုယျရောက ကလေးယူဖို့အစကတညျးက ရညျရှယျမထားဘူးဆိုရငျတော့ ထညျ့စဉျးစားရမယျ့ အခကျြတဈခကျြလြော့သှားပါပွီ။ အဲဒီလိုမဟုတျဘဲ ကလေးယူခငျြတယျဆိုရငျ သူနဲ့ကိုယျနဲ့ရဲ့ ဘဝအစီအစဉျတှေ ပိုပွီး တိကဖြို့ လိုအပျလာပါပွီ။
ဒီကလေးကို ပွညျ့ပွညျ့စုံစုံထားဖို့အတှကျ အခြိနျယူကွိုးစားသလို ကလေးကို ဘယျအရှယျမှာ ယူမယျဆိုတာတှကေိုပါ ထညျ့စဉျးစားသငျ့ပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ မိနျးကလေးဘကျက အသကျအရမျးကွီးသှားရငျ ကလေးယူဖို့ အဆငျမပွတောတှေ ရှိလာနိုငျပါတယျ။
ဒါကတော့ သုံးဆယျအရှယျဝနျးကငျြအထိ လကျမထပျဖွဈကွသေးတဲ့ စုံတှဲတှေ စဉျးစားသငျ့တဲ့အခကျြတှပေါ။ အခဈြစဈမှနျရငျ အခြိနျတှကွောသှားလညျး အခဈြတှေ လြော့မသှားတာ မှနျပမေဲ့ အခြိနျဆှဲလှနျးရငျလညျး ဘိုးဘှားရိပျသာကမြှ မင်ျဂလာဆောငျဖွဈမှာစိုးလို့ အကျဒျမငျသတိပေးလိုကျရပါတယျလို့
Tagged 30's, Couple, love, marriage, wedding
ချစ်သူစုံတွဲတွေ လက်မထပ်ခင် ကြိုတင်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်သည့် အကြောင်းအရင်း(၅)မျိုး
Posted on August 26, 2017 August 28, 2017 Author Christina Rosy
ယောင်းနဲ့ကိုကို လက်ထပ်ဖို့အတိအကျဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဆိုရင် ဒီအကြောင်းအရင်း (၅)မျိုးကို သေချာကြိုတင်ဆွေးနွေးထားသင့်ပါတယ်။
အချစ်တစ်ခု ခိုင်မြဲဖို့ ဒါတွေ လိုလိမ့်မယ်။
Posted on March 1, 2017 March 2, 2017 Author
အချစ်ရေးတစ်ခု ရေရှည်ခိုင်မြဲဖို့က အချစ်တစ်ခုတည်းနဲ့တင် မပြီးပါဘူး။ ဦးပေါ်ဦးရဲ့ စကားလို သူ့ချည်းပဲလားလို့မေးရင် ဥာဏ်လေးနဲ့ပါဘုရားလို့ ပြန်ဖြေရပါလိမ့်မယ်။အသက်ကို ဥာဏ်စောင့်သလို အချစ်ကိုလည်း ဥာဏ်စောင့်ပါတယ်
ရည်းစားနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို တန်းတူအချိန်ပေးနိုင်အောင်…
Posted on January 7, 2019 Author Hnin Ei Oo
နှစ်ကိုယ်ခွဲချင်စိတ်တွေ ပေါက်နေပြီမလား၊ မညာချင်စမ်းပါနဲ့ ချိမရယ် 😛